नयाँ भेरियन्टको को-रोना संक्रमण हुदाँ देखिने यी पाँच लक्षण, पढ्नुहाेस् र सक्दाे सेयर गर्नुहाेस् ! – Annapurna Daily
नयाँ भेरियन्टको को-रोना संक्रमण हुदाँ देखिने यी पाँच लक्षण, पढ्नुहाेस् र सक्दाे सेयर गर्नुहाेस् !
On May 14, 2021 114
काठमाडौँ । नयाँ भेरियन्टको को-रोना संक्रमण हुदाँ देखिने यी पाँच लक्षण, पढ्नुहाेस् र सक्दाे सेयर गर्नुहाेस् ! नयाँ भेरियन्टको को- रोनाले यतिबेला विश्वलाई फेरि तहसनहस बनाएको छ ।
नयाँ भेरियन्टको को- रोना छिमेकी मुलुक भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको छ जसका कारण पछिल्ला दिनहरुमा को- रोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको छ । भारतमा प्रतिदिन लाख बढी को- रोना संक्रमित बढिरहेका छन् भने नेपालमा पनि संक्रमण दर अघिल्लो महिनाभन्दा आठ गुणा बढीसम्म देखिन थालेको छ। नयाँ भेरियन्ट को- रोना मूलत युके र ब्राजिलबाट आएको बताइन्छ ।
यहाँसम्म कि को- रोनाका डबल म्युटेन्ट भाइरस पनि संक्रमितहरुमा देखिन थालेका छन् । नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमितहरुमा यस्ता लक्षणहरु देखिएका छन्र, हेर्नुस्:-